मेरो जिबन कथा न कसैले पर्दामा हेर्न सक्छ न कसैले किताबमा पढ्न - बडिमालिका खबर
मेरो जिबन कथा न कसैले पर्दामा हेर्न सक्छ न कसैले किताबमा पढ्न
मङ्लबार, भदौ ३१, २०७६
अभिनेत्री स्वेता खड्काले व्यापार र सिनेमासँगै सामाजिक सेवामा पनि कदम बढाएकी छिन् । उनले सिन्धुपाल्चोकको माझी बस्ती निर्माणकै लागि सिनेमा ‘कान्छी’को छायाकंन पछि सारेकी छिन् । स्वेता खड्का अहिले धेरैको लागि रोल मोडल बनेकी छिन् । तर उनको जीवनको यहाँसम्मको यात्रा त्यति सहज थिएन । पनौतीमा जन्मेर अहिले स्वेता खड्काका नामले स्थापित हुँदासम्म जीवनमा घटेका विविध घटना र रहस्यहरु उनले आज हामीसँग सेयर गरेकी छिन् ।
म काभ्रे जिल्लाको पनौती नगरपालिका वडा नम्बर १२ मा जन्मिएँ । त्यहि मेरो बाल्यकाल एकदमै रमाईलोसँग बित्यो । अहिले पनि मलाई मेरो बाल्यकाल फेरि फिर्ता आए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । बाल्यकालमा मेरा धेरै साथीहरु थिए । कहिलेकाही म उनीहरुको लिडर जस्तै हुन्थेँ भने कहिले निकै लजाउथेँ । बाल्यकालमा मलाई धेरैजसो भाँडाकुटी खेल्न मन पर्थ्यो ।
म शनिबार आयो की साथीहरुको घरमा खेल्न गईहाल्थेँ । मेरो दिदी बहिनी अनि दाजु भाई पनि छन् तैपनि बुबा आमाको प्यारो सन्तान भने मै थिएँ । अहिले पनि उहाँहरु यसको बारेमा कुराकानी गर्नुहुन्छ । मैलै काभ्रे मै बसेर पढेँ । सानै देखि अटेरी अबुझ नभएर मेहेनती र ज्ञानी भएकोले पनि होला म सबैको प्रिय भएको ।
मलाई जतिले पनि भेट्नुहुन्थ्यो सबैलै एकदमै माया गर्नुहुन्थ्यो । मेरो पढाई भने सामान्य थियो । शिक्षकहरुले सधैँ मलाई पढ्न प्रेरित गर्नुहुन्थ्यो । अफिसमै बोलाएर मलाई सुझाव सल्लाह दिने गर्नुहुन्थ्यो । कहिले काही मामाघर जाने भएकाले मेरो स्कुल पनि छुट्थ्यो । स्वभावले त म भाई बहिनी भन्दा पनि सानो बन्न खोज्थेँ ।
जान मन लागेको ठाउँमा जान नपाए रोएर आमा बुवालाई मनाउने कोशिस गर्थेँ । म यस कुरामा भने अलि जिद्दी थिएँ । सानो छँदा विद्यालयबाट पनि मलाई शिक्षक शिक्षिकाले बोकेरै घर सम्म पुर्याईदिनुहुन्थ्यो । त्यो बेलाको कुरा सम्झिँदा आफू निकै भाग्यमानी छु जस्तो लाग्छ । पढाईमा समान्य भएपनि म फेल भने भईन । मेहनत गरेँ ।
बनेपामा पनि मेरो घर बजार मै हो । यही कारण मलाई माया गर्ने धेरै हुनुहुन्थ्यो । म एकदमै संस्कारी थिएँ । आमासँग पूजा गर्न मन्दिर जान्थेँ । सकेसम्म आमालाई काममा सघाउने मेरो बानी थियो । साथीहरुसँग पनि म एकदमै रमाउने खालको थिएँ । मेरो अरु साथीहरु चाहि एकदमै हल्ला गर्ने गर्थे । तर म भने सधैँ चुप लागेर बस्थेँ । म स्वभाव अलि कातर थियो ।
म किशोरावस्थामा एकदमै पढ्नुपर्छ भन्ने खालको थिएँ । लजालु भएका कारण अरुको अगाडि गएर बोल्नु पर्यो भने मेरो कान रातो हुन्थ्यो । म एकदमै डराउँथे । बाटोमा हिंड्दा कसैले जिस्कायो भने साथीहरु बोल्ने गर्थे । तर, म बोल्न पनि सक्दिनथेँ । चुप लागेर आफ्नो बाटो हिड्थेँ । त्यस्तो स्वभाव थियो मेरो किशोरावस्थामा ।
बाल्यकाल देखि किशोरावस्थासम्म मैले आफ्नै तरिकाले धेरै रमाईलो गरेको छु । त्यो समय अहिले सम्झिँदा पनि धेरै खुशी लाग्छ । मलाई सबैले माया गर्ने भएकाले पनि होला म अलि जिद्दी स्वभावकी छु । हाम्रो घरतिर केटीहरुको प्राय छिटो विवाह हुन्थ्यो । प्रायको विवाह १२ पढ्दा पढ्दै हुन्थ्यो । ब्याचलर पढ्दा त सबै केटीहरु सकिन्थे ।
मेरो घरमा पनि सबै जना दिदी बहिनीहरुको आत्मनिर्भर नभई विवाह भयो । विवाह पछि मात्र उहाँले काम गर्न थाल्नुभयो । १५÷१६ वर्षको उमेरमा पुगेपछि मलाई आत्मनिर्भर भएपछि मात्र विवाह गर्ने सोच आउन थाल्यो । त्यो उमेरमा छिटो विवाह गर्दिन, आत्मनिर्भर नबनी, केही नगरी विवाह गर्दिन, परिवारको बोझ बन्न चाहन्न, जस्ता कुराहरुले मेरो मनमा स्थान पाउन थालेका थिए ।
म परिवारमा बोझ नबनेर उहाँहरुलाई सधै सहयोग गर्न चाहन्थे । यस्तै सपना र चाहनाले होला मैले १७ वर्षको उमेरबाटै काम गर्न थालेँ । तर घरबाट भने, ‘अहिले नै काम गर्दा पढाई बिग्रिन्छ नगर’, भन्नुहुन्थ्यो । तर मैले जिद्दी गरेर काम गर्न थालेँ । मेरो बुवा आमालाई भने म सेकेण्ड लेफ्टिनेन या त असई भएको हेर्न मन थियो । मेरो बुबाको नाम कृष्ण बहादुर खड्का हो । उहाँ आर्मी अफिसर हुनुहुन्थ्यो । आमाको नाम गोमा खड्का हो । म घरको साहिली छोरी हो ।
भाग्यले मलाई यहि राख्यो
उमेर बढाएर आर्मीमा लैजाने कुरा घरमा नभएको पनि हैन । मैलै पनि सेकेण्ड लेफ्टिनेन हुनलाई मैले पनि मेहनत त धेरै गरेको थिएँ । तर त्यहि समयमा मेरो जीवनमा टर्निङ पोईन्ट आयो । म सिनेमा तिर आएँ । मैले काम गर्न थालेँ आर्थिक रुपमा परिवारको लागि म बोझ भईन । चर्चित व्यक्तिहरुको बायोग्राफी पढ्थेँ । उनीहरुले त्यो सफलता कसरी पाए त्यसलाई नियाल्थेँ । व्यापारमा सफल व्यक्तिहरुको कथा पनि मैले पढ्थेँ । यी कुराले मलाई धेरै प्रेरणा दिएका छन् ।
मैले सानै उमेरमा व्यापार शुरु गरेको हो । सानै उमेरमा लगानी गरेर व्यापार शुरु गर्दा सबै जना डराउनु भएको थियो । तर मैले सबैलाई म गर्छु भनेर विश्वास दिलाएर काम गरेँ । मलाई मेरा सबै साथीहरुले अमेरिका जाऊ भन्थे । त्यो बेलामा म सबै साथीहरुलाई भन्थेँ, ‘म नेपालमा बसेर पैसा कमाउँछु अनि अमेरिका घुम्न जान्छु’ । त्यो कुरा अहिले पूरा पनि भयो । म अहिले सबै ठाउँ घुम्न जान सक्छु । समयले मलाई यहि राख्यो सबै साथीहरुलाई बाहिर लग्यो ।
जीवनको टर्निङ पोईन्ट सिनेमा
एस एल सी सकाउना साथ मलाई स्कुटर चलाउनु पर्यो । घरमा पनि मागेपछि ममी बुवाले दिईहाल्नुहुथ्यो । ममी बुवाले एक्दमै माया गर्नुहुन्थ्यो । अनि सानै उमेरमा अप्ठ्यारो बाटोमा स्कुटी चलाउनु परेका कारण मेरो ब्याक पेन शुरु भयो । पछि डाक्टरले शारीरिक व्यायाम र फिटनेसको सुझाव दिनु भयो । त्यसपछि मैले नेशनल सेन्टर अफ डान्समा डान्स पनि हुन्छ फिजिकल एक्सरसाईज पनि हुन्छ भनेर जोईन गरेँ । त्यहि डान्स गर्ने क्रममा मलाई सिनेमाको अफर आएको थियो । मैलै १९ वर्षको उमेरमा सिनेमा कहाँ भेटिएलामा काम गरेको हो । यो मेरो जीवनको टर्निङ पोईन्ट हो ।
व्यापार मेरो रुची
धेरैले मलाई ईन्जिनियर पनि भन्नुहुन्छ । यो मिडियामा आएको गलत जानकारी हो । म ईन्जिनियर हैन । बानेश्वरको ईन्द्रेणी कम्प्लेक्समा मेरो ईन्जिनियरिङ्ग कन्स्ट्रक्सन कम्पनी छ जसले घरको भित्री र बाहिरी भाग सजाउने काम गर्छ । अहिले भने हामीले ईन्द्रेणी कम्प्लेक्सको छैटौँ तलामा हाईड्रो पावरको अफिस राखेर त्यहाँ सामान नअटेका कारण बालुवाटारमा रसियन एम्बेसीको छेउमा सारेका छौँ ।
मेरो कम्पनीले भाटभटेनी, प्रभु बैंक, ग्रयान्ड बैंक, हामा टावर, होटेल ईन्दे्रणी, कलिवुड प्लानेट, राईजिङ्ग मल लगायतका बिल्डिङमा काम गरिसकेको छ । मलाई व्यवस्थापनमा एकदमै ठूलो रुची छ । मसँग हरेक चुनौती स्वीकार गर्न सक्ने क्षमता छ जस्तो लाग्छ । कुनै पनि काम गर्नलाई पढ्न पर्छ भन्ने छैन । त्यो सबै काम म्यानेजमेन्टले गर्छ । हामीले त आँट्नुपर्छ ।
कहाँ भेटिएला खेलिसकेपछि धेरै सिनेमाको अफर आयो मलाई । तर मैले दादा (श्री कृष्ण)सँग तीनवटा सिनेमामा काम गरेँ । अनि मैले दादा (श्री कृष्ण)कै अनुरोधमा ‘कोहिनूर’मा लगानी गरेँ । निर्माताको रुपमा सिने उद्योगमा प्रवेश गरेँ । मैले धेरै सिनेमामा काम गरिन । मेरो पूरा ध्यान व्यापारमै थियो । दर्शकले दिनु भएको मायाका कारण मैले वर्षमा एउटा जति सिनेमा खेलेको थिएँ ।
जीवनमा कुनै पनि घटना निम्ता दिएर घट्दैन
सबैको जिन्दगीमा दुख, सुख, उकाली ओरालीहरु आउँछन् । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । कुन बेलामा के हुन्छ भन्ने कुुरा कसैलाई थाहा हुँदैन । कुनै पनि घटनाले निम्ता दिएर आउँदैन । म यहाँ अहिले तपाईँसँग कुराकानी गरिराखेको छु एकछिनमा के हुन्छ केही थाहा छैन । बिगतको कति कुराले पनि मानिसहरुलाई अल्झाउने र दुख दिईरहने गर्छ ।
सुखले रमाईलो हुन्छ भने दुखको क्षणले झन् दुख थपिदिन्छ, तनाव बढाउँछ । तर, मेरो जीवनमा जुन घटना घट्यो त्यो मैले सपना या विपनामा पनि सोचेकी थिईन । त्यो के भयो भनेर म आफैँ पनि कल्पना गर्न सक्दिन । त्यो घटना मेरै जीवनमा किन भयो मलाई थाहा छैन । केटी मान्छेको विवाह पछिको जीवन पूरै फेरिन्छ । मेरो पनि विवाह भयो ।
विवाह भएपछि एकदमै धेरै मिल्ने जीवनसाथी, सँगै काम गरेको साथी, सहयात्री भएर काम गरेको साथी, व्यापार गरेको साथीसँग मेरो जीवनको अन्त्य यसरी हुन्छ भनेर मैले सोचेको पनि थिईन । यो दुःखान्त घटनाबाट बाहिर आएर हाँसी खुशी जीवन बिताईरहेको छु । एउटा किताब पढ्दा पनि हामी कुनै पल खुलेर हाँस्छौ भने कुनै पल दुख मानेर रुन्छौ । मेरो जिन्दगी पनि किताबको कथा झँै भएको छ ।
मैले शुरुमा धेरै रमाईलो गरेँ । बीचमा अचानक के के भयो भयो– म मरेँ । म अहिले पहिलाको स्वेता खड्का नभएर नयाँ स्वेता खड्का हो जस्तो लाग्छ मलाई । मैले पुरानो कुराहरु बिर्सिएको छैन । तर, अहिले मैले नयाँ जीवन पाएको छु । म एकपटक मरेर नयाँ जीवन जिउनको लागि अहिले दुःख गरिरहेको छु जस्तो लाग्छ ।
उक्त घटनापछि मलाई सम्हाल्न खुबै गाह्रो भयो । ६ महिना सम्म ढाडको बिरामी भएँ । त्यो ६ महिना म ड्रिप्रेशनमा पनि गएँ । धेरै डाक्टरहरु, परामर्शदाताहरु आएर मलाई सम्झाउनु भयो । म आफ्नै घरमा बाथटब नाँघेर जान नसकेर, सावर लिन नसकेर आमा अनि दिदी बहिनीहरुले मलाई नुहाईदिनु हुन्थ्यो ।
कोहीसँग बोल्न मन लाग्दैन्थ्यो । कफी र चिया खाँदा खाँदै गिलासहरु फुटाईदिन्थेँ । त्यो बेलामा मलाई केही थाहा नै हुँदैनथ्यो । तर अहिले त्यो पल सम्झिँदा लाग्छ, त्यो बेला म एकदमै पिडामा थिएँ । दुःखमा थिएँ । त्यसपछि म दोस्रो उपचारको लागि अस्ट्रेलिया गएँ । त्यहाँ पनि डाक्टरहरुले मलाई सम्झाउनु भयो । फेरि नेपाल आएर अमेरिका गएँ ।
मलाई अमेरिका परिवारले पठाएको थियो । म प्लेनमा उक्लिन त के एउटा सिँढी चढ्न र गाडीबाट ओलिर्न पनि सक्दिनथेँ ढाडले गर्दा । म ह्वीलचियरको साहाराले गएँ । त्यो पल अहिले पनि मलाई याद आउँछ, केहि खाएपछि औडाहा हुने, छटपटि हुने । रातभरि निन्द्रा नलाग्ने । त्यहाँ गएर उपचार गरेको दुई घण्टा पछि भने मलाई आराम हुन थाल्यो ।
उपचारले काम गर्न थाल्यो । ढाडको दुखाई कम हुँदै गयो । डाक्टरहरुले पनि दिमागी उपचार गर्नुभयो । अमेरिका गएपछि बल्ल मैले दोस्रो जीवन पाएँ । त्यहाँको दर्शकहरुले विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रमहरु अर्गनाईज गरेर ‘कोहिनुर’ सिनेमा रिलिज गर्नुभयो । प्रत्यक्ष रुपमा मलाई माया गुर्नभयो । अमेरिका भरि कोहिनुर शो भयो । उहाँलाई माया दिनुभयो । श्रद्धा दिनुभयो ।
अनि मैले पनि त्यहाँ सबै देखेर जीवनलाई बिस्तारै बुझ्दै गएँ । त्यसपछि म बल्ल होसमा आउन थालेँ । दिन बित्दै जाँदा म निदाउन सक्ने भएँ । हाँस्न सक्ने भएँ । अरुसँग रमाउन सिकेँ । लुगा लगाउन सिकेँ । मेकअप गर्न सिकेँ । त्यो बेलामा मलाई आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्दा एक्दमै डर लाग्थ्यो । अहिले त्यो बेलाका केही तस्बिरहरु युट्युबमा हेर्दा म यस्तो भएको थिएँ ! जस्तो महसुस हुन्छ ।
मेरो अनुहार सुन्निएको अनि तौल बढेको । म त सेलिब्रेटी पो थिएँ त सबैको प्रिय । म यसरी परिवर्तन भईसकेँ ! जस्तो महसुस हुन्थ्यो । म त पूरै ड्यामेज भएँ भन्ने फिल हुन्थ्यो । अनुहार हेरेर मेकअप गर्दागर्दैै रुन्थेँ । कार्यक्रमको अफर आँउथ्यो । कपाल कोर्न खोज्थेँ तर सक्दिनथेँ । मेरा ती कुराहरु, ती पीडाहरु कसैले सिनेमामा पनि हेर्न सक्दैन र किताबमा पनि पढ्न सक्दैन ।
तर मलाई जहाँ सम्म लाग्छ त्यो क्षणमा आफ्नो छोरीलाई, आफ्नो साथीलाई, आफ्नो बहिनीलाई जो कोहीलाई पनि राखेर कल्पना गर्नुभयो भने म कुन पीडाबाट बाहिर आएँ भन्ने कुरा सबैले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ । म व्यापारमा जस्तो सुकै परिस्थित आएपनि व्यवस्थापन गर्न सक्छु । हदै भए म डुबौँला । फेरि मरुभूमिबाटै संघर्ष शुरु गरौँला ।
‘कागजपपत्र’ सिनेमाको ‘तिमी जाने बाटो कता’ गीत रिलिज
‘युनिभर्सल बोस’सँग सन्दीपको तनाबपूर्ण भेट !
‘सभापतिले नै गुट चलाएपछि पार्टीको के हालत हुन्छ ?’
तर यो जीवनको व्यवस्थापन भने एकदमैै गाह्रो रहेछ । म मा त्यो हिम्मत कसरी आयो, मलाई केले प्रेरित गर्यो केही पनि थाहा छैन । म दिन प्रतिदिन दिन ठिक हुँदै आएँ । म अहिले पनि रुन्छु । तर म अहिले अलिकता रुँदा धेरै हुनुहन्छ सपोर्ट गर्ने । अस्ति भर्खरै स्वेता श्री फाउण्डेशनको कार्यक्रममा मलाई सपोर्ट गर्न देशका ठूला ठूला कलाकारहरु आउनु भयो ।
डाक्टर भोला रिजाल, बसुन्धारा भुषाल, जितु नेपाल, प्रमोद खरेल, निखिल उप्रेती लगायतका कलाकारको उपस्थिति थियो । दादालाई माया गर्ने धेरै हुनुहुन्थ्यो र सबैले मलाई पनि माया गर्नुहुन्छ । तपाईँहरु सबैले दिनु भएको मायाले नै मलाई काम गर्न हौसला दिएको छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा हामी आफूले आफैलाई माया गर्यौँ भने बल्ल माया गरिदिने मान्छे पाउँछौँ । माया गर्ने मान्छे पायाँै भने जिन्दगीको दुख बिस्तारै भुल्दै जान सकिन्छ । परिबर्तन खबर बाट
अफगानिस्तानमा २४ घण्टा यता भएका हिंसामा ९० जना मारिए
हाम्रो दुुइ बर्ष
‘वरिष्ठ उपाध्यक्षमा मिलाउन एकपटक अन्तिम प्रयास गर्छु’
‘यही ढङ्गले जाने हो भने संसद् नै आवश्यक छैन’
अमेरिकाविरुद्ध आणविक हतियार प्रयोग गर्नुको विकल्प नरहेको उत्तर कोरियाको चेतावनी
भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या ४ लाख नाघ्यो